Wasiir Koore Oo Dhex Dabaalanaya Shaqo Aan Tiisa Ahay Iyo Baal Marka Amarka Madaxwaynaha | Hangool News
Wasiir Koore Oo Dhex Dabaalanaya Shaqo Aan Tiisa Ahay Iyo Baal Marka Amarka Madaxwaynaha
Hangoolnews (Hargeysa):- Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Saleebaan Cali Koore waxa uu tiraba ka jawabay dhalliilo loo jeediyey xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi.
Wasiirka biyaha Somaliland ayaa hadda u muuqda mid xiiseynaaya ka jawaabista dhalliilaha loo jeedinaayo xukuumadda Biixi. Dhawaan ayay ahayd markii uu Saleebaan Cali Koore inta uu warbaahinta soo fadhiistay sheegay in uu u jawaabayo Baashe Cali Jaamac iyo Cali Sandule oo ka tirsanaa xukuumaddii hore ee madaxwayne Siilaanyo kuwaasi oo xukuumadda cusub ee Biixi eedo is barkan u jeediyey. Wasiir Koore waxa uu sheegay in lagu soo khasbay in uu ka jawaabo eedaha labadaasi masuul xukuumadda u jeediyeen.
Af-hayeenka xukuumadda Somaliland ayaa ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Guri-barwaaqo bal se hadda waxay u muuqataa in shaqadii Guri-barwaaqo uu wasiir Koore si dadban ula wareegay.
Saleebaan Cali Koore ayaa noqday masuul jecel ka soo muuqashada warbaahinta iyo u jawaabista cidda xukuumadda dhalliisha. Su’aasha isweydiinta muddan ayaa in wasiir Koore lagu soo khasbaayo ka jawaabista eedaha loo soo jeedinaayo xukuumadda siduu isaguba hore u sheegay iyo in ay xiiso ka tahay.
Af-hayeenka xukuumadda ayay shaqadiisu tahay in uu ka hadlo wixii khuseeya xukuumadda gaar ahaan in uu ka jawaabo eedaha inta badan loo jeediyo.
Sidoo kale Wasiir Koore waxa kale oo tiraba dhowr jeer u jawaabay dawladda federaalka Soomaaliya oo hadalo ka soo yeedheen.
Dhanka kale wasiirka Koore waxa uu dhawaan ka jawaabay hadal ka soo baxay guddoomiyihii hore ee gobolka Saaxil oo isagu markii uu xilka wareejiynaayey sheegay in uu shacabka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera uu khalad ka galay wasiir Koore waxa uu sheegay in uu sharciga la tiigsan doono guddoomiyaha isla markaasina uu meel kaga dhacay sharcigii qaranka.
Ugu danbeyntiina madaxwayne Muuse Biixi oo dhawaan wareegto uu so saarey waxa uu madaxda dawladda ku amray in aanay ka hadli karin waxaan shaqadooda ahayn. Wasiirka biyaha ayaa u muuqda in uu baal marey wareegtadaasi madaxwaynaha maadama oo faraha la galay shaqo aan tiisa ahayn.